अनलाइन संचारमाध्यम सम्बन्धि निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग « Clickmandu
अनलाइन संचारमाध्यम सम्बन्धि निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग
प्रकाशित मिति : 26 March, 2017 7:08 pm
काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने भए स्वनियमनमा जानु पर्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए । सरकारले जारी गरेको वर्तमान निर्देशिका फिर्ता लिएर नयाँबाटोबाट अगाडी बढ्न बिष्टले अग्रह गरे ।
अनलाइन पत्रकार संघले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको बिरोधमा केन्द्रित रहेर राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. विस्टले यस्तो बताए । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा संचार सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारले ल्याएको निर्देशीका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
सरोकार नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विष्टले निर्देशिका फिर्ताको लागि बिषेश अभियान संचालन गरिने जानकारी दिए ।
महासंघका उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले पे्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्न महासंघले जस्तो सुकै कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आम सञ्चार नीति कार्यन्वयन नगरी सुशासन ऐनमा टेकेर निर्देशिका ल्याउने सरकारको नियत गलत रहेको बताए । पटक-पटक निर्देशिका ल्याएर परिक्षण गर्ने प्रयासा सरकारले नगरोस् भन्दै उनले यो निर्देशिका फिर्ता गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए ।
अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले निर्देशिकाको मात्र नभई साइबर ऐनको बारेमा प्रस्ट भएर नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
पटक पटक फिर्ता भै सकेको निर्देशिका ल्याएर सरकारले अप्ठ्यारो पार्न खोजको बताउदै उनले सरकारसंग वर्ता गरेर निश्कर्शमा पुग्ने औचित्य सकिएको खारेज गर्नको लागि आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन कुमार सिंहले पे्रस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यस्तै मधेशी पत्रकार मन्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विपी साहले पनि निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।